Koogeek inopa neye kumba michina uye hutano zvishongedzo | Ndinobva mac
Ignacio Sala | | apuro, dzakawanda
Kana zvasvika pakutonga imba yedu, mumusika tine vagadziri vakasiyana vanoisa kwatinogona zvishandiso zvatinogona nazvo chinogadzirisa midziyo yemumba kungave kuburikidza nemirairo yezwi kana kuburikidza neanoshanda application kana zvakananga kubva kuImba application pane iOS kana macOS.
Kana isu tichida kutora matanho ekutanga mune otomatiki emba yedu, plugs uye mababu anowanzo ari zvigadzirwa zvakanakisa kutarisa zvakanakira zvinopihwa nekugona kubata akateedzana emidziyo kure, nepo isu tisingawani zvese mukati nekunze kwemba yedu. Pazasi tinokuratidza izvo zvitsva zvinopihwa naKoogeek kwatiri kwenguva pfupi.
1 Smart tambo inoenderana ne Alexa neGoogle Mubatsiri
1.1 Mashoko ekusimudzira
2 LED tambo inoenderana naSiri, Alexa uye Google Mubatsiri
2.1 Mashoko ekusimudzira
3 Smart abs inosimudzira
3.1 Mashoko ekusimudzira
4 E27 socket inoenderana neKeKKit
4.1 Mashoko ekusimudzira
5 Nharaunda USB C 7 muna 1 dodocool
5.1 Mashoko ekusimudzira
6 Magnetic kuchaja base kweApple Tarisa dodocool
6.1 Mashoko ekusimudzira
Smart tambo inoenderana ne Alexa neGoogle Mubatsiri
Kana zvese zvishandiso zvatiri kuda kubata zviri kure zviri munzvimbo imwechete, pachinzvimbo chekusarudza kutenga smart plugs zvakasiyana, mhinduro yakanakisa kutora tambo yemagetsi. Koogeek inoisa zvatinogona tambo yakangwara kwatinokwanisa kubatanidza kusvika pamidziyo mina. Asi pamusoro pezvo, tinogona zvakare kuishandisa kubhadharisa yedu iPhone, iPad, Apple Watch kana chero chimwe chishandiso kuburikidza neiyo 4 USB yekubatanidza iyo inosangana.
Mutengo weiyi tambo unoenderana neese maAmazon Alexa uye Google Mubatsiri ndeye 36,99 euros, asi kana tikashandisa kodhi UTVANRYU, iwo wekupedzisira mutengo unosara kungoita 26,99 euros.
Tenga smart strip inoenderana ne Alexa neGoogle Imba
Khodhi yekukudziridzwa: UTVANRYU
Inoshanda kusvika Kukadzi 21, 2019 na23: 59 pm
Nhamba yemayuniti aripo: makumi mashanu
LED tambo inoenderana naSiri, Alexa uye Google Mubatsiri
Kana iwe uchinge waunzwa kumba otomatiki, iwe uchida kupa yako imba kubatika zvakanyanya, iyo Siri inoenderana LED tambo ndiyo yauri kutsvaga. Iyi LED strip inotibvumidza isu zviise parinenge pese pese, kungave kwakatenderedza TV kutiratidza mavara emufananidzo (kana tikatumira zvirimo kubva kuMac), kutenderera hwindo kana kabhodhi, mumusuwo wemusuwo, mukona mune yakatwasuka mutsara kana kuita akasiyana maumbirwo.
Mutengo wakajairika weiyi Koogeek LED strip ndeye 37,59 euros. Kana tikashandisa kodhi JMZZKQ69, wekupedzisira mutengo wekupa wakaderedzwa kusvika ku28,59 euros. Kugadzikana kwatinotipa, sezvo kunowirirana nevose vanotora chikamu mumusika, kunoita kuti ichi LED chibvise chimwe chigadzirwa chakakurudzirwa chekudzora imba yedu pamwe nekuchipa kubata chaiko.
Tenga Koogeek LED Strip Mwenje
Smart abs inosimudzira
Iyo Koogeek yepamuviri electrostimulator ine EMS tekinoroji, inotumira simba remagetsi kumhasuru kusimudzira kufamba munzvimbo iyoyo, izvo zvichatibvumira kuisimbisa uye kutanga kuumba iyo mhasuru iyo yakagara iriko asi yakavanzwa nedumbu redu. Iko mashandiro ari nyore kwazvo nekuti isu tinongofanirwa kusarudza chirongwa uye neyakaomarara nhanho kuburikidza nekushandisa kunowanikwa kune ese iOS neApple.
Mutengo wakajairwa weKoggeek wepamuviri electrostimulator ndeye 70,99 euros, asi kana tichida kuchengetedza mashoma maeuro, isu tinofanirwa kushandisa kodhi LA7DZ6TA kuitira kuti mutengo wekupedzisira ugare pa55,99 euros. Isu tichiri munguva yekutanga kugadzikana kugadzira yedu abs kubva kunyaradzo yesofa redu.
Tenga Abdominal Muscle Stimulation Mudziyo
E27 socket inoenderana neKeKKit
Chimwe chezvigadzirwa izvo zvatiinazvo kutanga kugadzirisa kure kumba kwedu ndiwo masuo. Koogeek anoisa kwatinogona muenzaniso Inoenderana ne E27 socket, uye kuti inowirirana naApple Siri wega mubatsiri, saka tinogona kuzvibata zviri kure kuburikidza neImba application, chishandiso chinowanikwa zvese kubva ku smartphone yedu uye kubva kuMac kwedu.
Mutengo wekapu iyi mushure mekushandisa kodhi D4M5D6L9 Iyo 28,99 euros, 4 euros kubva pamutengo wayo wenguva dzose.
Tenga E27 Mwenje Mubati
Nharaunda USB C 7 muna 1 dodocool
Iyo USB-C yekubatanidza yave yakajairika muindasitiri uye nhasi mazhinji makomputa anoisanganisa, ichi chiri choga chiteshi chiripo. Kutenda kuKoogeek 7 mu1 Hub tinogona kuwedzera kubatana kwemidziyo yedu kuti tishandise chiteshi chimwe chete kuchaja iyo, kuibatanidza kune yekunze yekutarisa kuburikidza neHDMI kubatana, shandisa 3 USB kubatana, iyo SD uye micro SD kadhi muverengi pamwe nekuwedzera USB-C kubatana.
Tinogona kuwana iyi HUB kwema 20,99 euros chete kana tikashandisa kodhi LGUZWW3D, uye nekudaro uwane dhisikaundi pamutengo wayo wenguva dzose wekutengesa, unova ma35,99 euros.
Khodhi yekukudziridzwa: LGUZWW3D
Magnetic kuchaja base kweApple Tarisa dodocool
Kana tichiwanzoenda parwendo uye taneta nekutora tambo yekuchaja yeApple Watch, tichitambura kuitira kuti isatsemuka parwendo rumwe nerumwe, chakanakisa chatingaite kutenga base yekuchaja yeApple Watch kubva ku dodocool. Iyi yekuchaja base inosimbiswa neApple, MFI, saka isu hatizove nechero dambudziko kana tichichaja chishandiso.
Kana isu tisingade kuishandisa kuenda parwendo, futi tinogona kuishandisa pahusiku hwedu hwehusiku, sezvo ichienderana nemamiriro ehusiku ayo anotiratidza iyo nguva painotsenderedzwa. Iyi yekuchaja base haisanganisi charger yekuibaya pamadziro, iyo tambo inoyera 92 cm uye inoenderana neese saizi yeApple Watch. Mutengo wemubhadharo uyu 29,99 euros, asi kana tikashandisa kodhi H8I2PSLT wekupedzisira mutengo unongova 20,99 euros.
Tenga MFI Kupeta Magnetic Charger Apple Tarisa dodocool
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » Zvitsva zvinopihwa kubva kuKoogeek kutonga imba yedu nekutarisira hutano hwedu kwenguva yakati rebei
Instagram ichave iri kuyedza kuisa Direct mune yayo desktop web vhezheni